Free fanompoana an-tserasera. Calculator hazo
Kajy ny boky ny hazo
Mifidy ny voalohany ho an'ny angon-drakitra ny kajy ny
Isan'ny tapa N
Quantity metatra toratelo isan- E
Ny vola lany amin'ny 1 metatra toratelo
Kajy ny sawn hazo
W - Ny sakan'ny ao amin'ny birao
H - Board hateviny
L - Ny halavan'ny amin'ny birao
N - Isan'ny tapa
E - Quantity metatra toratelo isan-
Maro tamin'ny fanorenana ny trano na ny fandroana miatrika ilaina ny kajy ny hazo be no takiana ho an'ny asa. Manapaha hevitra hatraiza ny birao na mila sakamandimby, tsotra. Fa ny vidin'ny hazo no matetika metatra toratelo isan-voalaza, ary amin'ity tranga ity dia mety kokoa ny mampiasa fandaharana manokana ny kajikajy. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny toerana ianao mahalala ny lavany, sy hatevin'ny sakan'ny ny zana-kazo, ary koa ny maro notorotoroiny, dia ho afaka ny kajy firy metatra toratelo amin'ny hazo ianao, ary tena mila ho lany ny iray metatra toratelo na iray birao.
Hazo no antsoina hoe noho izy ireo azo avy sawing ny vatan-kazo. Applied hazo ny fanorenana, fanaka, famonosana entana sy ny vokatra hafa isan-karazany. Ankehitriny, io karazana fitaovam-panorenana no malaza indrindra. Wood nanao zana-kazo, izay no fitaovana miaro tena tsara, manohana milamina hamandoana sy tsy mitaky fitsaboana sy fikarakarana manokana, izay tena mety mahatonga izany.
Dia sawn hazo, lela hazo fisaka, edging birao, nanamboatra lalamby. Bruce dia hazo, ampiasaina amin'ny lafiny rehetra. Tahaka ny efa nanapaka ny kianja na mahitsizoro fizarana hazo fijaliana. Ny hazo mahazatra indrindra ampiasaina amin'ny fananganana ny trano, toerana fandroana ary ny rafitra hifanindry.
Birao nanapaka hazo dia zavatra maro izay ampiasaina mavitrika eo amin'ny asa fanorenana ny trano ivelan'ny, ary amin'ny famolavolana ny atitany toerana. Manapaka birao ao amin'ny fizarana dia lava mahitsi-. Edging birao Tsy mitovy amin'ny nendahina ny sisiny mba tsy tapaka izany, ka mbola hita maso sosona ny hodi-kazo ny hazo izay voaendaka birao ity. Construction aro-fanina na fisotroana dia fisotroana, kely kokoa noho ny hazo fijaliana-fizarana ara-dalàna, sy be mpampiasa amin'ny fanorenana.
Hazo fisaka mitovy amin'ny karazana hazo, izay natao ny. Dia ho azy ireo toy ny hazo coniferous kesika, spruce sy larch. Sy ny hazo mafy toy ny hazo terebinta sy ny beech, Birch, Aspen.
Manavaka ny hazo koa ny hamandoana. Izy ireo dia mizara ho manta amin'ny hamandoana ny 22 isan-jato sy maina amin'ny 22 isan-jato ny hamandoana ambany. Voalohany ampiasaina asa fanorenana, ary ny faharoa noho ny fanamboarana ny fanaka.
Ihany koa ny manavaka karazana hazo maro. Ny safidy ny karazana dia miankina amin'ny fampiharana. Noho izany, fa fanaka mampiasa fitaovana ny naoty faran'izay ambony indrindra. RAFITRA sy ny vokatra mety tsara hazo novolavolaina Grade 1 sy Grade 2 sy 3 no ampiasaina fotsiny ho toy ny fanorenana biraon'ny.
Torohevitra momba ny fitehirizana
Sawn hazo, raha toa ka tsy nampiasaina nandritra ny fotoana ela, dia tokony ho voaro amin'ny mandomando. Mety hitarika ho amin'ny ny fahasimban'ny. Tsy nanolorana azy ho fitehirizana hazo, stacked teo ambonin'ny tsirairay. Teo anelanelan'ny ny sosona ny zana-kazo na hazo fisaka tsy maintsy napkin.